बाबुछोराको हत्या आरोपी पक्राउ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १७:२२ लेखक Sabita Roka
गण्डकी । बाबुछोराको हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी स्याङ्जाले हरिनास गाउँपालिका–३ ललहीका ३३ वर्षीय दीपक भन्ने दानबहादुर मल्ललाई पक्राउ गरेको छ । बिहीबार पक्राउ परेका मल्ललाई बिहीबार नै कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
जाहेरीको आधारमा अनुसन्धान गर्दा हत्यामा संलग्न मल्ल नै रहेको स्याङ्जा प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी नवीनकृष्ण भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार म्याद थप गरी थप अनुसन्धानका लागि मल्ललाई हिरासतमा राखिएको छ ।
निर्मला हत्यामा एसपी विष्ट खोरमा जाने पक्का
काठमाडौं । निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा कञ्चनपुर जिल्लाका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज बिष्टसहितका प्रहरीले प्रमाण नष्ट गर्न मतियार बनेको मत उच्चस्तरीय…
लाभका नयाँ बाटाहरू भेटिएलान् । गएको धन सम्पत्ति प्राप्त होला । नयाँ जोश जाँगर प्राप्त होला । मनमा…
क्रिकेट रंगशाला बनाउन आर्थिक सहयोग जुट्न थाल्यो
गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा…
तीन वर्षीय बालक पनि प्रहरी खोरमा, बालककी आमा काठमाडौंको ठमेल क्षेत्रको पेसेवर लुुटेरा !
काठमाडौं । तीन वर्षका बालक पनि प्रहरी खोरमा पुुगेका छन् । बालककी…
शेरबहादुर र आरजुलाई सिध्याउन निधि नै उत्रिए, कांग्रेसमा बबन्डर !
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको नेतृत्व हत्याउन जहाँबाट सुरुवात गरेका थिए, त्यहीँबाट उनको पतनको सुरुवात भएको छ । देउवाले…